पहिरो प्रभावित भन्छन् : ‘हेलिकोप्टरको आवाज सुन्दा, खानेकुरा आउँछ कि भन्ने आश जाग्छ’ – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/पहिरो प्रभावित भन्छन् : ‘हेलिकोप्टरको आवाज सुन्दा, खानेकुरा आउँछ कि भन्ने आश जाग्छ’
जाजरकोट : शुक्रबार नै राहत लिएर हेलिकोप्टर बारेकोट आउँदैछ भन्ने सन्देश विस्थापित परिवारसम्म पुगिसकेको थियो । उनीहरु दिनभर हेलिकोप्टरकै प्रतिक्षामा रहे तर खराब मौसमका कारण शुक्रबार आउन नसकेको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर शनिबार आइपुग्यो । उक्त हेलिकोप्टरले रेडक्रसका एक सय थान कम्मल र १५ थान त्रिपाल खसालेर एकजना घाइतेलाई लिएर फर्कियो ।
खाद्यान्न लगायतका खानेकुरा पाउने ठूलो आसमा रहेका विस्थापित परिवार गैरखाद्य सामग्री मात्र आएको सूचना पाएपछि निराश भएका छन् । बारेकोट सिनचौरका मानबहादुर नेपालीले हेलिकोप्टरले खाने कुरा ल्याउँला भनेको त कम्मल र त्रिपाल मात्र पो लिएर आएको बताए । ‘घर छोडेको आज ९ दिन भइसक्यो, घरमा भएको केही चामल र पिठो ल्याएर अहिलेसम्म जेनतेन गुजरा चलायौं। अब के खाने ? राहत आउँला भन्ने आशमा थियौं तर अहिलेसम्म राहत पाइएन उनले गुनासो सुनाउँदै भने, ‘त्रिपाल र कम्मलको पनि आवश्यकता छ तर त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा पेट भर्नु छ ।’
‘बाँच्नका लागि पनि नखाइ भएन तर के खाने ? हेलिकोप्टरको आवाज सुन्दा पनि केही खानेकुरा ल्याउँछ कि भनेर आशा जाग्छ,’उनले भने।’ पहिरो गएयता तीन पटक हेलिकोप्टर आइसकेको छ । तर हेलिकोप्टरले केही थान त्रिपाल, कम्बल र सात बोरा चामल मात्र त्यहाँ पुर्‍याएको छ ।
पहिरो प्रभावित बारेकोटमा खाद्य संकट परेको छ । बारेकोटका बाढी पहिरो प्रभावित भोकभोकै पर्न थालेका छन् । खानेकुरा नभएपछि विस्थापित परिवार समस्यामा परेका छन् । गत असार २५ गते बारेकोट ४ सार्कीटोलमा गएको पहिरोमा परी ११ जनाको ज्यान गएको छ भने एकजना अझै बेपत्ता छन् । त्यस्तै बारेकोट ६ धुमाखोलाले बगाउँदा बेपत्ता दुईजना पनि अझै फेला पर्न सकेका छैनन् । गैरखाद्य सामग्री लिएर बारेकोट पुगेको हेलिकोप्टर ।
अभिनेता सुशान्त मृत्यु अघि आठ घन्टा के-के भयो ?